Nidaam Nabadeed Oo Ku Wajahan Geeska Afrika – By Abiy Ahmed | HAATUF ONLINE
Home » Featured » Nidaam Nabadeed Oo Ku Wajahan Geeska Afrika – By Abiy Ahmed
Nidaam Nabadeed Oo Ku Wajahan Geeska Afrika – By Abiy Ahmed
Hawlgallada ay qabatay dowladda federaalka Itoobiya ayaa shacabka Tigreega ka xoreeyay tobannaan sano oo maamul xumo ah oo ay waday Jabhadda Xoreynta Dadka Tigray (TPLF). Tani waxay daaha ka rogtay rajo cusub, laakiin sidoo kale walwal, mustaqbalka Itoobiya iyo doorka ay ku leedahay Geeska Afrika iyo meelo ka baxsan.
Rajadu waxay timid markii si wanaagsan looga saaray – kooxda musuqmaasuqa iyo kaligi-taliska ah ee TPLF. Itoobiyaanku hadda waxay qiyaasi karaan mustaqbal aan ku saleysneyn qowmiyadaha, laakiin midnimada, sinnaanta, xorriyadda, iyo dimuqraadiyadda. Intaa waxa sii dheer, xudunta kala qeybsanaanta qowmiyadeed ee sumaysay sumcadda xidhiidhka u dhexeeya dowlad-goboleedyada Geeska Afrika oo dhan ayaa hadda laga gudbay.
Laakiin ma dafirikaro in ka saarida kooxda TPLF ay shiday xasilloonida bulshada caalamka. Waxaa walaac laga muujinayaa qowmiyadaha ku caanbaxay qowmiyadda Tigreega iyo caqabadaha hortaagan gargaarka bani’aadamnimada. Dowladeyda waxa ka go’an inay wax ka qabato oo ay ka saarto tabashooyinkaas.
Marka, si aan uga soo xigto Thomas Jefferson, “ixtiraam ku habboon fikradaha aadanaha” ayaa igu qasbaya inaan sharaxo sababta ay dowladaydu u dhaqantay si ay nabad ugu soo celiso Tigray, sida aan uga yareynayno dhibaatada halkaas ka jirta, iyo sababta dadaalladeenna – loo taageeray, waxaan rajeynayaa, bulshada caalamku – waxay ka faa’iideysan doonaan dhammaan dadka dalkayga, oo ay ku jiraan kuwa jooga Tigray iyo dhammaan Geeska oo dhan.
Dowladna uma dulqaadan karto askarteeda iyo dadka shacabka ah ee aan waxba galabsan in si gaadmo ah loogu dilo laguna dilo tobanaankooda, sidii ku dhacday gacanta TPLF ee dayrtii hore. Waajibaadkeyga koowaad ee ra’iisul wasaare iyo taliyaha guud ee ciidamada qaranka, kadib, waa inaan ka ilaaliyo Itoobiya iyo dadkeeda cadawga gudaha iyo dibaddaba.
Hawlgalladayadii aan ka qabannay Tigreega waxaa loogu talagalay in si dhaqso leh loogu soo celiyo nabadda iyo kala dambeynta. Tan waan ku guuleysanay, laakiin dhibaatadii iyo dhimashadii dhacday inkasta oo dadaalkayagii ugu fiicnaa ay aniga iyo shaqsigeygaba dhib badan u geysteen iyo sidoo kale dhammaan dadka nabadda jecel halkan iyo dibaddaba.
Joojinta dhibaatada kajirta Tigray iyo wadanka oo dhan ayaa hada ahmiyadeyda ugu sareysa. Tani waa sababta aan ugu baaqayo Qaramada Midoobay iyo hay’adaha gargaarka caalamiga inay la shaqeeyaan dawladayda si aan, wadajir, u gaarsiino gargaar wax ku ool ah dhammaan dadka Tigreega ah ee u baahan.
Dhanka kale, waxaan ka shaqeyneynaa, habeen iyo maalin, inaan gaadhsiino sahayda lagama maarmaanka u ah muwaadiniinteena ku sugan Tigreega iyo kuwa ku dhibaateysan gobolada deriska la ah, iyo sidoo kale inaan hubinno in xuquuqda aadanaha la ixtiraamo oo nolosha caadiga ah dib loo soo celiyo. Si loo guuleysto, caqabado badan waa in laga gudbaa. Tusaale ahaan, dib u soo celinta khadadka isgaarsiinta ee ay si ula kac ah u burburisay kooxda TPLF ayaa tijaabinaysa awoodeena aan ku gaarsiin karno gargaarka bini’aadanimo. Shaqadan dib-u-dhiska, bulshada caalamku waxay ku caawin kartaa gargaar aad u weyn.
Dawladaydu waxay kaloo diyaar u tahay inay caawiso hogaamiyaasha bulshada ee Tigray ee u heelan nabada. Runtii, ayaynu horayba u gaadhaynaa iyaga. Beesha caalamku way fahantay waxa uu ahaa TPLF. Inbadan waxay cambaareeyeen rabshadaha ku saleysan qowmiyadaha. Waxaa wax laga xumaado ah, in qaarkood ay diyaar u ahaayeen inay indhaha ka qarsadaan jirdilka kooxda TPLF, maqnaanshaha, iyo dilalka sharci darada ah. TPLF la’aantii, waxaa la yiri, Itoobiya waxay qatar u gashay kala qoqobnaanta qoomiyadaha, sida Yugoslavia 1990-yadii. Burburkii Itoobiya, dooddu waxay noqotay, waxay keeni doontaa fowdo guud ahaan Geeska Afrika.
Caqliga saliimka ahi wuxuu inoo sheegayaa in xukun ku dhisan kala qaybsanaanta qowmiyadeed aanu sii jiri karin; laakiin, sida maahmaahdu tiraahdo, caqliga saliimka ahi had iyo jeer ma aha wax caadi ah. Nasiib wanaagse, bulshooyinka aadamigu way u dulqaadan karaan rabshadaha isirka, isirka, iyo diinta muddo aad u dheer.
Qiyaastii shantii sano ee iiga horaysay doorashadayda bishii Abriil 2018 aniga oo hoggaamiye ka ahaa Jabhaddii Kacaanka Dimuqraadiga ee Jabhadda Dimuqraadiga ee Jabhadda Dimuqraadiga ee xilligaas jirtay Itoobiya, taas oo illaa iyo xilligaas ay ku jirtay TPLF, caqabadihii caanka ahaa ee taliska ayaa batay. Kooxda TPLF waxay kujawaabtay arxan daradii caadiga ahayd. Codbixintii 2018 waxay waddanka u dhaqaajisay jiho cusub oo loo wada dhan yahay. Xisbigan siyaasadeed ee aan hada hogaamiyo waa kii ugu horeeyey ee ka dhisan dalka itoobiya oo aan ku dhisnayn midab, diin, iyo isir.
Siyaasadda gobolka ee TPLF waxay ahayd fidin aan mugdi ku jirin oo ah istiraatiijiyaddeeda qaybi iyo xukun oo gudaha ah. TPLF Ethiopia, tusaale ahaan, waxay qaadatay siyaasad ka saarida iyo faquuqa ku wajahan Eritrea, taas oo ay ka soo qaaday dagaallo wakiillo ah oo ka socda dhulka madaxbanaan ee dalalka deriska ah ee aan xasilloonayn – taas oo yareynaysa jilicsanaantooda. Itobiya oo xor ka ah kooxda TPLF waxay udagaalan doontaa nabada iyo horumarka loo dhanyahay. Gudaha gudaheena, “Itoobiyaan Cusub” waxay ku saleysnaan doontaa sinnaanta dhamaan kooxaha naga tirsan, oo ay ku jiraan dadka tabaalaysan ee Tigray. Bannaanka, waxaan u dhaqmi doonnaa qaab garowsanaya in danaheenna qaran ay si aan kala sooc lahayn ugu xidhan yihiin kuwa jaarka ah.
Heshiiskii nabadeed ee lala saxiixday Ereteriya 2018 wuxuu tusaale nool u yahay waxa ay Itoobiya awood u leedahay oo ay diyaar u tahay inay qabato. Heshiiskaasi wuxuu xaliyay khilaaf xoog leh oo labaatan sano jirsaday, wuxuuna u ogolaaday Ereteriya inay dib ula midoobaan Geeska iyo bulshada caalamka. Tan ugu muhiimsan, muwaadiniinteeda, iyo kuwa ku nool dalkayga ee deggan xadka, ayaa hadda ku noolaan kara iyada oo aan hadhka dagaalku dusha ka fuulayn.
Dowladeydu waxay sidoo kale dooneysay inay dib u soo ceshato xidhiidhka Ethiopia ay la laheyd wadamada kale ee deriska nala ah. Ka dib qalalaasihii siyaasadeed ee ka dhacay Suudaan sanadkii 2019, Itoobiya waxay door weyn ka qaadatay dib u soo celinta dalkaas oo ka soo laabtay dagaalkii sokeeye, iyadoo gacan ka geysatay abuuritaanka dowlad ku meel gaar ah oo rayid ah iyo wakiillo milatari. Sidoo kale, doorka xasilinta Itoobiya ee Soomaaliya ayaa ah mid labaad, midna dadaallada aan ugu jirno xasilloonida Koonfurta Suudaan aan kala go’ lahayn.
Siyaasadda arrimaha dibedda ee Itoobiya ee hadda waxay ku saleysan tahay aaminaad ah in isdhexgalka gobolka ee dhow uu waxtar u leeyahay dhammaantood. Dadaalladeenna ku aaddan sidii aan u shaqeyn lahayn Aagga Ganacsiga Bilaashka ah ee Qaaradda Afrika waa qayb muhiim ah oo tan ka mid ah. Si kaamil ah, toddobaadyo yar uun ka hor, waxaan daahfurnay waddo weyn oo isku xirta Waddada Addis Ababa-Nairobi-Mombasa, mashruuc ka takhalusi doonta caqabadaha jireed ee ka imanaya ganacsiga xadka u dhexeeya Kenya iyo Itoobiya. Sidoo kale, wadada ka timaadda Addis Ababa ee aadda dekedda Ereteriya ee Assab waxaa loo dayactiray sidii halbowlaha gaadiidka ee ganacsiga caalamiga ah.
Intaa waxaa dheer, iyada oo lala kaashanayo shirkadaha gaarka loo leeyahay, waddooyin waaweyn oo waaweyn ayaa la qorsheynayaa in ay ku xirmaan Itoobiya dekedaha Jabuuti iyo Casab (si loo beddelo waddada weyn ee hadda la dayactirayo), taas oo markaa lala xiriirin doono Juba, caasimadda Koonfurta Suudaan, taasoo bixinaysa dadka saboolka ah. , dal aan bad laheyn oo leh marin ganacsi oo macquul ah. Mashaariic wadajir ah oo ku saabsan dekeddaha iyo saadka, beeraha lagu nasto ee warshadaha, iyo macdan qodista ayaa sidoo kale la soo saaray. Waana rajadayda qotada dheer in Biyo-xidheenka weyn ee dib-u-cusboonaysiinta Itoobiya, markii la dhammeeyo, uu heli doono taageerada dhammaan deriskeenna isla markaana siin doono fursado aan horay loo arag qof kasta oo ku nool Bariga Afrika.
Kaliya Itoobiya oo nabad ah, dowladna ay kuxirantahay xeerarka anshaxa aadanaha, ayaa door wax ku ool ah ka ciyaari karta Geeska Afrika iyo wixii ka baxsan. Waxaa naga go’an inaan la shaqeyno deriskeenna iyo beesha caalamka sidii loo fulin lahaa ballanqaadkan.